Samsung dia afaka nanangana Galaxy Fold Lite | Androidsis
Samsung dia afaka nanangana Galaxy Fold Lite
2019 no taona nanolorana ny Galaxy Fold voalohany, taranaka voalohany niaina nifanaraka tamin'ny zavatra tafiditra tao ary nanana zavatra maro tokony hatsaraina. Miaraka amin'ny taranaka faharoa natombok'i Samsung tamin'ny volana aogositra lasa teo, nanatsara ny ankamaroan'ny teboka ratsy ny orinasa Koreana. Ary koa, tamin'ny fiandohan'ny taona dia namoaka ny Glaxy Z Flip.
2021 dia toa ny taonan'ny finday avo lenta ho an'i Samsung, satria mikasa ny handefa ny roa, nefa modely telo samy hafa eny an-tsenaAraka ny filazan'ny bandy UBI Research, iray amin'izy ireo ny kinova Lite hamela hanitatra ny isan'ny mpampiasa finday avo lenta an'ny Samsung.
Volana maro lasa izay dia niresaka momba ny fahafahan'ny Samsung mamoaka kinova Lite an'ny Z Fold isika, saingy tsy nandre zavatra hafa intsony isika tao anatin'ny volana maro. Ity maodely Lite ity dia hanana efijery kely kokoa noho ny Z Fold ankehitriny, manodidina ny 7,5 santimetatra amin'ny 8 sy ankehitriny ny efijery ivelany dia eo anelanelan'ny 4 sy 5 santimetatra amin'ny 6,5 santimetatra amin'ny maodely ankehitriny.
Mikasika ny vidin'ny Galaxy Z Fold Lite, dia mety ho hita io antsasaky ny vidin'ny S21 farany ambony sy ny vidin'ny Galaxy Z Flip, eo anelanelan'ny 1000 sy 1500 euro. Andro vitsy lasa izay, niresaka momba ny fihenan'ny vidin'ny tandavan Samsung S izahay, fihenan'ny vidiny izay mety ho antony namoronana an'io tandavan Fold Lite io.
Saingy koa, antony iray hafa handefasana sehatra ara-toekarena amin'ny tsipika finday avo lenta satria nahavita mitondra saika tanteraka ny savily, iray amin'ireo ampahany manan-danja indrindra amin'ny finday avo lenta (ary raha tsy tokony holazaina amin'i Motorola sy ny RAZR) ary ny fonony fitaratra manify manify mandrakotra ny efijery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Samsung dia afaka nanangana Galaxy Fold Lite
Android 11 izao dia tonga ao amin'ny Vivo V20 Pro 5G miaraka amin'ny fanavaozana vaovao
Ny fakan-tsary any aoriana an'ny Mi 10 Ultra dia tena tsara, saingy tsy dia lavitra loatra [Review]